Boho Floral Print Plus Lacagta Sare - Dhaqdhaqaaqa
Boho Floral Print Plus Lacagta Sare
$ 36.00 $ 60.00 Waxaad kaydisaa 40% ($ 24.00)
Floral Plus Size Sundress Tani waa mid aan caadi aheyn sida caadiga ah. Waa dharka saxda ah ee haweenka jecel dareenka diirimaadka xilliga dayrta iyo xagaaga iyo in ay dareemaan qorraxda garbahooda. Waxaa la gashan karaa xafladaha habeenkii, raaxada leh qoyska ama marka aad rabto inaad xor u noqoto.
Boho Floral Plus Size Sundress waxaa laga sameeyey dharka iyo suufka taasoo samaysa doorasho aad u raaxo leh nooc kasta oo cimilada diiran. Waxay leedahay suunka falejada iyo dabacsan si ay ugu raaxeyso jirkaada. Ma laha qurxin laakiin maaddada waxaa loogu talagalay qaababka daabacan ee xusuusta ubaxa iyo qorraxda dayrta iyo gu'ga.
Waxaa lagu heli karaa qiyaaso kala duwan oo ay ka mid yihiin M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL, iyo 5XL micnaheedu waxaa weeye in uu jiro xajmiga dumarka oo dhan. Waxa kale oo ay ka timaadaa laba qodob oo muhiim ah: casaan iyo buluug.
2 Colors Gradient Long Dress Hippie
2 Colors Gradient Long Dress Hippie $ 40.80 $ 68.00
3 / 4 Batwing Sleeve Plus Lacageed Long Robe
3 / 4 Batwing Sleeve Plus Lacageed Long Robe $ 46.20 $ 77.00
3 / 4 Length Floral Harem Pants $ 52.70 $ 62.00
3 / 4 Dhererka Dabeecadda Habboon ee Harem
3 / 4 Dhererka Dabeecadda Habboon ee Harem $ 52.70 $ 62.00
Khadka A Royal Golden Long Sleeveless Maxi Dharka
Khadka A Royal Golden Long Sleeveless Maxi Dharka $ 53.40 $ 89.00
Calaamadaynta Abstract White iyo Blue Dharka la seexdo
Calaamadaynta Abstract White iyo Blue Dharka la seexdo $ 71.20 $ 89.00
Asian Arts Kaftan Maxi Dharka
Asian Arts Kaftan Maxi Dharka $ 57.60 $ 72.00
Shukriga Sayniska iyo Sayniska
Shukriga Sayniska iyo Sayniska $ 36.00 $ 60.00
Dharka Asymmetric Colleks Midy Dresses
Dharka Asymmetric Colleks Midy Dresses $ 40.80 $ 68.00
Labbiska Asymmetrical Layered Double Iarye
Labbiska Asymmetrical Layered Double Iarye $ 46.20 $ 77.00